Iinkwenkwezi ezi-4 kwikhaya leholide e-Arnøyhamn
UMarit - DANCENTER unezimvo eziyi-163 zezinye iindawo.
Eli khaya lisanda kubuyiselwa le holide likwindawo entle yokujonga indawo yiLangfjord kwicala elingasemazantsi eArnøya. Isiqithi, esisekupheleni kweLyngenfjord emantla eTromsø ngembono yeLyngen Alps, saziwa ngokuba nendalo entle ehlotyeni nasebusika. Indlu ibuyiselwe kakuhle kwaye inomgangatho olungileyo. Amagumbi okulala amabini aneebhedi eziphindwe kabini ububanzi obuyi-150 cm lilinye, kunye nebhedi enye. I-TV yesathelayithi enamajelo angama-20, kuquka namazwe ngamazwe amaninzi. Emva kweentsuku ezisebenzayo unokukonwabela ukuhlamba kwi-whirlpool ngasekhaya. Ukusuka kwindlu ngumbono omkhulu wentaba iTrolltinden kwelinye icala le-fjord yenye yezona ndawo zidumileyo zokuhamba kwiindawo zesiqithi. Ukusuka entabeni ngumbono omangalisayo osingise e-Ullsfjorden naseLyngenfjorden kunye neentaba ezinkulu zeLyngsalpene emazantsi. Kwakhona ebusika, kukho iimeko ezintle zokukhwela i-ski ukuya encotsheni yentaba kunye nendawo enkulu kuwe ofuna ukufumana izibane ezisenyakatho kwisibhakabhaka se-polar. Ukusuka e-Akkarvik unokuhamba ecaleni kolwandle kwicala elingasezantsi le-Arnøya, ukuya kwiilali ezishiyiweyo iGeitvika kunye neSotneset. Ngaphandle konxibelelwano lwendlela, iimeko zokuphila zaba nzima kakhulu apha. Izindlu ezininzi zafuduselwa kwiindawo ezikumbindi wesiqithi, ngelixa ezinye zisekho. I-Arnøya inezinye iindawo ezininzi zokukhwela intaba ezintabeni. Indawo elungileyo yohambo lwemini ngemoto ejikeleze isiqithi, kubandakanya nelali i-Årviksand kumntla-ntshona weArnøya. Isikhitshane semoto esisuka eStorstein sisiya eArnøya sibaleka amaxesha amaninzi ngemini kwaye ukunqumla kuthatha malunga nemizuzu engama-25. Ukusuka eTromsø unokuthatha isikhephe sesantya ukuya eArnøyhamn eArnøya. Kwisiqithi kukho amachibi atyebileyo ngeentlanzi apho unokuloba ngentonga. IArnøya ijikelezwe yindawo enkulu yolwandle kwaye apha uya kufumana awona mathuba amahle okuloba eNorway, kubandakanya ihalibut, icod kunye necatfish. Irenti: 19 iinyawo Rana Family kunye cabin encinane kunye 40 hp Mariner 4 stroke outboard injini. 16.5 unyawo isikhephe Hansvik kunye ndlwana encinane, 30 hp Suzuki 4-stroke outboard injini. Izikhephe zinezandi ze-echo, iigps kunye neetshathi zokucwangcisa kwaye zixhonywe kwi-pier edadayo kwi-marina, i-6 km ukusuka endlwini. IZIKHETHI ZINGAQESHWA NGEXESHA 1.5-15.9.
Uyilo: Ikhitshi(12 m2)(i-cooker(umbane), ihood, umatshini wekofu(ifiltha), imicrowave, idishwasher, ifriji, isikhenkcisi(> 250L), i-tumble dryer, umatshini wokuhlamba), Igumbi lokuhlala/ibhedi(28 m2)(TV (isathelayithi, iziteshi zikamabonakude waseJamani), isitovu(inkuni), unomathotholo), igumbi lokulala(ibhedi enye, ibhedi yabantu ababini), igumbi lokulala(ibhedi enye, ibhedi elala abantu ababini), igumbi lokulala(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokulala(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokuhlambela( isitya sokuhlambela, indlu yangasese), igumbi lokuhlambela(igumbi lokufudumeza phantsi)(ibhafu okanye ishawari, isitya sokuhlambela, indlu yangasese), iwhirlpool(yabucala, ngaphandle, into yokufudumeza, iza kuchithwa, abantu aba-5), ithafa (100 m2), ifenitshala yegadi, i-BBQ, ukucoca intlanzi. itafile, umoya kwimpompo yobushushu bomoya
Le ndlu ifuna idiphozithi ye$165. Iza kutsalwa yodwa yile ndlu ngaphambi kokuba ufike okanye xa ubhalisa xa ufika.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arnøyhamn